Ka tearing ntutu gị si na-agbalị nyefee foto site na iPad ka USB flash mbanye? Ọ na-mara na i nwere ike ozugbo mbupụ foto na iPad igwefoto Roll ka USB flash site ịkwụnye n'ime a eriri USB na PC. Otú ọ dị, ọ dịghị ụzọ dị nyefee foto site na iPad Photo Library. Na nke a, ọ bụ ezi nhọrọ na-agbalị a ọkachamara-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ, dị ka Wondershare TunesGo Ochie (n'ihi na Windows ọrụ) ma ọ bụ Wondershare TunesGo Ochie (Mac). Na nke a mma ngwá ọrụ, ị nwere ike mfe ịdọrọ na dobe foto na iPad Igwefoto Roll na Photo Library ka USB flash mbanye.
Part m: Nyefee foto site na iPad ka PC wee si PC ka USB flash mbanye
e nwere abụọ ngwọta nyefee foto USB flash mbanye aka diredtly site na kọmputa:
Ngwọta 1: Nyefee foto site na iPad na kọmputa na iji email;
Ngwọta 2: Nyefee foto site na iPad na kọmputa na iji iPhoto.
Mgbe ahụ nyefee foto site na PC na-USB flash mbanye.
Ma ọ bụ fọrọ nke nta ahụ na-ebufe "transfer foto site na iPhone ka USB flash mbanye". Ya mere, ebe anyị nwere ike na-ezo aka a Guide: otú nyefee Pictures si iPhone ka Flash Drive
Part II: Nyefee photos etolite iPad Flash mbanye na TunesGo Ochie easliy
Ibudata ngwá ọrụ a nyefee foto site na iPad ka USB mbanye.
Cheta na: Ma Windows version na Mac na nsụgharị ndị Ofụri Esịt dakọtara na The New iPad, iPad Obere, iPad na Retina ngosi, iPad 2 na iPad na-agba ọsọ iOS9, iOS8, iOS 7, iOS 6 & iOS 5. Ke ibuotikọ emi, Aga m agbalị Windows version, ya bụ, Wondershare TunesGo Ochie.
Ihe mbụ ị ga-eme bụ iji wụnye TunesGo Ochie na kọmputa gị. Agba ya na-egosi isi window na kọmputa na ihuenyo. Mgbe ahụ, jikọọ USB flash mbanye na kọmputa na eriri USB. Mgbe ọ na-ahụrụ, ị kwesịrị ị na-emeghe flash mbanye disk na kọmputa.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPad na kọmputa
Mgbe ahụ, plọg n'ime eriri USB jikọọ gị iPad na kọmputa. TunesGo Ochie ga chọpụta gị iPad otu mgbe, na mgbe ahụ na-egosi ya na isi window. Na-ekpe sidebar nke isi nwaanyị di ya nwụrụ, ị nwere ike ele music, listi ọkpụkpọ, foto, wdg na gị iPad.
Nzọụkwụ 2. Copy foto site na iPad ka USB flash mbanye
Na, na, na-aga "Photos" ke ekpe sidebar. Igwefoto Roll na Photo Library egosi elu na nri ebi ndụ. Ịdọrọ na dobe abụọ nchekwa ka disk flash mbanye. Ma ọ bụ họrọ na ị na nchekwa (s) na pịa "Export ka". Na mmapụta faịlụ nchọgharị window, chọta USB flash mbanye disk. Na, na, idetuo na nchekwa (s) na ya.
Mbupụ photos, i nwere ike imeghe Igwefoto Roll ma ọ bụ Photo Library, ma họrọ gị chọrọ photos, mgbe ahụ, mbupụ ha ka ha USB flash mbanye.
Cheta na: The albums n'okpuru Photo Library Atiya kere na TunesGo Retrocan nwekwara ike exported ka USB flash mbanye.
Ị mere nke ọma! I jisiri nyefee foto site na iPad ka flash mbanye. N'ezie, e wezụga photos, TunesGo Retroempowers ị ịkwaga music faịlụ, foto, na kọntaktị na SMS na kọmputa. Ya mere, download TunesGo Retroto ịkpali iPad foto USB flash mbanye.
Video nkuzi maka Nyefee Photos si iPad ka USB Flash Drive
> Resource> iPad> Nyefee Photos si iPad ka USB Flash Drive